Raysulwasaaraha Itoobiya oo Muqdisho ku tagay safarkiisii ugu horeeyay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaRaysulwasaaraha Itoobiya oo Muqdisho ku tagay safarkiisii ugu horeeyay
Madaxweyne Farmaajo oo Abiy ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha. [Sawirka]
Abiy ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxmed Cabdullaahi Farmaajo.
Labada hoggaamiye ayaa la filayaa in ay wadahadal yeeshaan saacadaha soo socda.
Waa markii kowaad Abiy uu safar ku yimaado Soomaaliya tan markii loo doortay Raysulwasaaraha Itoobiya bishii lasoo dhaafay ee April.
Raysulwasaaraha Itoobiya ayaa asbuucyadii lasoo dhaafay safar ku tagay dalalka kuyaala gobolka sida Kenya, Jabuuti iyo Masar.
Ammaanka Muqdisho ayaa maalmihii u dambeeyay aad loo adkeeyay.
June 8, 2018 Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo soo jeediyay in la joojiyo dagaalka Tukaraq
Mogadishu-(Puntland Mirror) Seven Kenyan soldiers and at least five Somali government forces were killed in Al-Shabab attack in Hosingo village in Lower Juba region of Somalia, sources said. At least ten soldiers from both nations were [...]